Hurumende yeUS: YAKADZIDZWA KUSVIRA ZVIZVIZVI ...
Congress yakamisa mangwanani eChipiri mangwanani pasina kuvandudzwa mari yehurumende yemubatanidzwa neWhite House yakapa mirairo kutanga basa rakaipisisa rekuvhara mabasa "asingakoshe" munyika yese.
Maseneta akasiya kutanga, achimisa nguva pfupi yapfuura pakati pehusiku, nepo vatongi veImba vakazvimisa past 1 am Asi nenzvimbo yepakati ichiratidza kusanzwisisika uye maseneta vachiramba kutaurirana pamusoro pekushandurwa kwemutemo wezvehutano, Imba zvakare yakasiya ndokuvimbisa kuyedza zvekare gare gare zuva.
Pasina tarisiro yechibvumirano chekuenderera mberi nemari mugore regore ra2014, hofisi yebhajeti yeWhite House yakaburitsa odha pakati pehusiku pakati pekutanga kwekuvhura mashandiro, ichitumira 800,000 vashandi vehurumende padanho uye vachisiya mazana ezviuru zvimwe vashandi vanodiwa kumhan'arira basa kunyangwe pasina vimbiso yekutambiriswa.
Chimwe chirongwa chisina kuvharika chirongwa chiri pakati peiyo GOP ire - Obamacare pachayo. Kugadziriswa kwemutungamiri wenyika kwehutano kunotsigirwa kuburikidza nemimwe mitemo uye, kunyangwe kudzima kwacho, kwatanga uye kuri kushanda kubva Chipiri mangwanani. MaAmerican vasina inishuwarenzi yehutano vava kugona kuenda kuchinjana-based exchange kuti vatange kunotenga inishuwarenzi, kazhinji nerubatsiro rwehurumende rubatsiro.
Iyo gakava rakapenga kunyangwe Congress ichichengetedza kusvika panguva yakatarwa, neImba Republican ichitumira zvirevo zvakadzokororwa kuSeneti maDemocrats, asi zvisati zvamboitwa nesenator imwe yehurongwa: bhiri remari risina tambo dzakabatanidzwa.
Mutungamiri Barack Obama vanotaura pamusoro pehondo yebhajeti kubva ku ...zvimwe>
"Iye zvino pava pakati peusiku uye hurumende huru yeUnited States yakavharwa," akadaro Lou.
Mutungamiri Obama akawedzera kumanikidza, achiburitsa vhidhiyo meseji Chipiri mangwanani yaakanyora kumauto eAmerica, maakapa mhosva Congress yekuregeredza mauto.
"Yakundikana kupasa bhajeti uye, semhedzisiro, vazhinji vehurumende yedu vanofanira kuvhara kusvikira Congress yaibhadhara zvakare," akadaro.
Chirongwa chekupedzisira cheImba chekukumbira nhaurirano dzakasarudzika neSeneti maDemocrats chakasangana nekusekwa neSeneti Majority Mutungamiri Harry Reid, uyo akati hapazove nekutaurirana nekutyisidzirwa kwekumiswa kuchiri kuuya.
Dambudziko raivepo raive rekutanga kwehurumende mashandiro. Mapaki eNyika anga achigadzirira kuvhara, vamiriri vehurumende vaizivisa nezve zviuru mazana masere zvevashandi vasina basa vanozoburitswa, uye vakuru vakayambira kuti kuchave nekunonoka mukati kugadzira nyowani kubatsirwa kunyorera kwehuwandu hwese hwezvirongwa.
Zvakadaro, rondedzero yezvinoonekwa se "yakakosha" uye inoramba ichishanda yaive yakareba: vanodzora traffic traffic, vamiririri veBorder Patrol, mauto nemauto emitemo vanoramba vari pabasa, kunyangwe kunze kwemauto, vaizozviita pasina mubhadharo - zvirinani munguva iripedyo.
Mutauri weImba John A. Boehner akabuda mushure mekuvhota kwekupedzisira kweImba kuti anzwe kuti iye nemauto ake vaita nepavanogona napo kuti hurumende irambe yakavhurika vachiyedza kugadzirawo mutemo wezvehutano.
"Tiri kutarisira kuti Seneti ichatora chikumbiro chedu," akadaro mumusangano mupfupi wenhau.
Imba maDemocrat, zvakadaro, akadaro iyo GOP 's Pushira yehurukuro yaive chiutsi cheutsi kuputira chokwadi chekuti maRepublicans aida kumanikidza kudzima.
VaRepublicans vakati izvo zvaive zvisiri chokwadi, uye vakanongedzera kuzvisarudzo zvitatu zvavakange vatotumira kuSeneti kuti vadzime, kunonoka kana neimwe nzira kuchinja Obamacare, kungoona mumwe nemumwe wavo achikundwa neUnited Democratic caucus muSeneti.
Yakazara Yekutanga Chinyorwa na Washington Times - Stephen Dinan